Recollective: Fikarohana an-tserasera an-tserasera sy fikarohana momba ny vondrona mifantoka | Martech Zone
Alakamisy, Aprily 3, 2014 Alarobia, Aprily 2, 2014 Douglas Karr
Tsipika famerenana dia fitaovana mora ampiasaina izay mitondra fikarohana karazana karazana vondrona mifantoka amin'ny Internet ary mamela anao hifandray amin'ireo mpihaino anao hahatakatra ny antony sy ny fomba fihevitry ny mpihaino anao ary hanaovany fomba fijery vaovao sy azo ampiharina amin'ny orinasanao. Ny mpijery dia misy ny mpanjifanao, ny mpiasa, ny mpikambana, ny mpampiasa vola, ny mpianatra ary ny tambajotra sosialy.
Ny Recollective Baseline dia mitondra ny fizotran'ny fandinihana ny fihetsika sy ny fihetsika ara-pihetseham-po amin'ny alàlan'ny vondrona ifantohan'ny olona an-tserasera ary manome anao fidirana amin'ilay fitaovana mitovy amin'ny nampiasan'ny Pros. Ireo mpampiasa ny serivisy dia mitady valiny amin'ny hevitra tsy manam-paharoa, mahazo fahatakarana tsara kokoa ny mpanjifany sy ny doka fitsapana ary ny marketing. Ao amin'ny sehatra maimaim-poana, izay manatsara ny finday, vondron'olona dia afaka mirotsaka an-tsehatra ary manontany fanontaniana mivelatra izay ahafahan'izy ireo mamaly amin'ny lahatsoratra, sary, horonan-tsary, rakitra, ary fanazaran-tena amin'ny haino aman-jery manan-karena - ao anatin'izany ireo mari-pahaizana mifandraika amin'ny sari-tany mafana ny valiny - amin'ny dingana mora sy voalamina.
Mametraha endrika, logo na zavatra hafa amin'ny endrika fisie ary asaivo mampiasa marika mifampiresaka ny olona mba hamaritana tsara izay tiany sy tsy tiany amin'ilay sary. Ny mpamorona dia hatolotra miaraka amin'ny valiny amin'ny sarintany hafanana.
nitarika - Ny mpandray anjara dia tarihin'ireo hetsika izay mitazona azy ireo hirotsaka sy liana hatrany.
Social - Afaka mifampiresaka amin'ny Internet ny mpandray anjara ary ny mpandrindra dia afaka mitarika ny fifanakalozan-kevitra sy mandinika ny valiny.
Mobile - Manohana tanteraka amin'ny finday rehetra, ao anatin'izany ny smartphone, tablette ary solosaina finday.
Analytics - Manamora ny fizotry ny fikarohana ny fitaovana fanavaozana. Ny tatitra amin'ny antsipiriany sy ny safidin'ny tabilao manankarena dia manamora ny fandikana ny data.
International - Ny interface software dia atolotra amin'ny teny anglisy, frantsay, espaniola, portogey (breziliana), alemanina, italianina ary holandey.
Araho ny valinteninao amin'ny Tsipika famerenana amin'ny fotoana tena izy mampiasa fitaovana famakafakana vaovao. Mizaha ny angon-drakitra tonga ho topy maso, mampandeha tatitra, na mamorona transcript.
Tags: vondrona mifantokafanadihadiana amin'ny findayfikarohana amin'ny Internettsipika miverinafikarohanatambajotra sosialyfanadihadianafikarohana momba ny mpampiasa